Liverpool Ayaa Dib U Soo Dhaweyn Doonta Ben Woodburn Ka Dib Amaahdii Blackpool
HomeWararka Ciyaaraha MaantaLiverpool ayaa dib u soo dhaweyn doonta Ben Woodburn ka dib amaahdii Blackpool
January 18, 2021 Wararka Ciyaaraha Maanta, Horyaalka Ingiriiska, Suuqa kala iibsiga 0
Ben Woodburn oo amaah ku joogay Blackpool ayaa dib ugu soo laabanaya kooxda Liverpool .
Woodburn ayaa kaliya seddex jeer shaxdiisa Sky Bet League One ku soo bilowday safka Blackpool wuxuuna ku guuldareystay inuu shabaqa soo taabto 11 kulan oo uu u saftay.
“Blackpool Football Club waxay xaqiijin kartaa in Ben Woodburn uu hada dib ugu laabtay Liverpool kadib dhamaadka heshiiskiisa amaahda ah” ayaa lagu yiri bayaan lasoo dhigay website-ka kooxda.
Naadigu wuxuu jeclaan lahaa inuu uga mahadceliyo Ben dadaalkiisii waxayna u rajeynayaan nasiib wacan mustaqbalka. ”
Woodburn wuxuu kulankiisii ​​ugu horreeyay u saftay Liverpool Nofeembar 2016, kaliya markii labaad ee uu safto, wuxuu noqday gooldhaliyihii ugu da’da yaraa ee kooxda isagoo jira 17 sano iyo 45 maalmood.
Wuxuu gool ka dhaliyay Leeds EFL Cup ee Anfield si uu uga sii fiicnaado rikoorka Michael Owen 98 maalmood.
Woodburn, oo sidoo kale amaah ku soo qaatay Oxford iyo Sheffield United, ayaa gool ka dhaliyay kulankiisii ​​ugu horeeyay ee Wales ee ay la ciyaareen Austria bishii September 2017 wuxuuna ku guuleystay 10 kulan, isagoo dhaliyay labo gool.